नेपालमै चिनाउन सकिएन ‘अर्थोडक्स’ चिया « Naya Page
नेपालमै चिनाउन सकिएन ‘अर्थोडक्स’ चिया
इलाम, ९ पुस । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा उत्पादित अर्थोडक्स चिया विश्वभर उच्च गुणस्तरीय मानिन्छ । विश्वबजारमा गुणस्तरीय मानिने भारतको दार्जिलिङ र कलकत्ताको अर्थोडक्सभन्दा नेपालको चिया उच्च गुणस्तरीय भएको दाबी गरिन्छ । यही लोकप्रियताले पश्चिमा मुलुकमा नेपाली चियाको माग उच्च छ ।
भारतले नेपाली चियालाई ‘गुणस्तरहीन’ भन्दा पनि भारतमै चिया बेच्नुपर्ने बाध्यता छ तर नेपाली बजारमा चिया पुर्याउन अहिलेसम्म कसरत भएकै देखिँदैन । १५ प्रतिशत अर्थोडक्स मात्र नेपालमा खपत हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । बाँकी चिया भारतलगायतका अन्य मुलुकमा बिक्री हुन्छ । नेपालकै ठूलो जमातले तराईको सिटिसी (क्रस टियर क्रल) चिया पिउनुपर्ने बाध्यता छ ।
भारतले चियामा हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदा अर्थोडक्सले कि तेस्रो मुलुक कि आन्तरिक बजारमा खपत गराउनुपर्ने हो तर यस्तो प्रयास भएको छैन । तेस्रो मुलुकका लागि व्यक्तिगतरूपमा बिक्रेताले बजार विस्तार गरे पनि आन्तरिक बजार जस्ताको तस्तै छ । यसैले एकातिर गुणस्तरीय चिया कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ भने कम गुणस्तरीय चिया नेपालमै बाहिरबाट भित्र्याउनु पर्ने स्थिति देखिन्छ ।
अहिले पनि धेरै नेपालीले अर्थोडक्स चियाको स्वादै नपाएको केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घ इलामका संस्थागत अध्यक्ष गोविन्द दाहाल बताउँछन् । सरकारी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धनका काम कम र अर्थोडक्सको लागत बढी भएकाले नेपाली बजारमा नपुगेको दाहालको भनाइ छ । दाहालका अनुसार नेपाली बजार बिगार्न भारतबाट सस्तो मूल्यमा चिया ल्याएर नेपाली चिया खपत हुन नसक्ने स्थिति बनाइने गरेको छ । गुणस्तरीय भन्दै भारतबाट चिया भित्र्याउने र नेपाली चियालाई बाहिर पठाउने गरिनाले चियाको आन्तरिक बजार नबढेको उनको भनाइ छ ।
‘नियतवश यस्ता काम हुने गरेका छन् । यस्ता काम हुन दिएसम्म नेपाली बजार बलियो हुनै सक्दैन’, उनले भने । दाहालले पछिल्लो समय भने आन्तरिक बजार बढाउन केही काम हुन थालेको बताए । सिटुसी बिजनेस (को–अपरेटिभ टु को–अपरेटिभ-सहकारीबाट सहकारी) अभियानले आन्तरिक बजार विस्तार थालेको दाहालले बताए । ‘एक जिल्लाको सहकारीले अर्को जिल्लाको सहकारीसँग साझेदारी गर्नुपर्ने नीति छ’, दाहालले भने, ‘यसले बजार विस्तार गर्न सक्छ ।’
त्यसो त बाह्य बजारमा नेपाली चिया पुर्‍याएवापत सरकारले छुट दिने गरेको छ । छुट भएकाले पनि बिक्रेताको आँखा नेपाली बजार नपरेको हो । पूर्वी पहाडी जिल्लाको अर्थोडक्स राजधानी (काठमाडौँ) समेत नपुग्ने गरेको देखिन्छ । चिया भन्ने बित्तिकै सिटिसी बुझिने र गुणस्तरीय अर्थोडक्स गुमनाम पारिनाले नेपाली खपत घटाइँदै लगेको देखिन्छ ।
चिया अर्थोडक्स ‘अर्ग्यानिकरण’ भएको र ‘अग्र्यानिक’ प्रयासमा रहेकाले महङ्गो पर्नाले आन्तरिक बजारमा नचिनिएको चियाका ‘अर्ग्यानिक’ अनुसन्धनकर्ता (इन्सपेक्टर) विशाल केसी बताउँछन् । अर्थोडक्स चिया पनि विभिन्न प्रकारका बनाइन्छ । अनेक स्वाद लिनका लागि अर्थोडक्स चियाबाट कालो टी, ग्रीन टी, यल्लो टीलगायतका प्रकार बनाइन्छ । यी चिया महङ्गो पर्ने र नेपालीले खरिद गर्न नसक्ने भएकाले अर्थोडक्स नचिनिएको केसीको भनाइ छ ।
अर्थोडक्स चियाको अग्र्यानिकरणका लागि पनि उद्योगले महङ्गो रकम तिर्नुपर्छ । यसका साथै वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्छ । यस्ता सबै खर्च जोड्दा अर्थोडक्समा लागत बढी पर्ने गर्छ तर सरकारले अर्थोडक्सलाई प्रमुख आवश्यकतामा राखेर नेपाली बजारमा पुर्याउन पहल गरे लागत कम हुने केसीको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय चियामा अनुसन्धानकर्ता र प्राविधिक बढिरहेका छन् । यतापट्टि सरकारको चासो हुनुपर्‍यो’, केसीले भने, ‘किसान तहसम्म सरकारी अनुदान र सहुलियत ऋणका काम पुगेमा लागत घटेर जान्छ तर यस्तो हुनसकेको छैन ।’
सरकारले चिया क्षेत्रलाई नहेरेकाले पछि परेको भनेर आलोचना समेत गरिन्छ । विदेशी मुद्रा विनिमयमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने यो क्षेत्रलाई स्वदेशमै प्रवद्र्धन गर्दा नेपाली उपभोक्ता बढ्ने निश्चित छ । हाल नेपाली चिया ३१ देश पुग्ने गरेको छ भने १३ देशबाट चिया आपूर्ति हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यदि नेपाली चियालाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने विदेशको चिया भित्र्याउनु नपर्ने देखिन्छ । यता चिया तथा कफी विकास बोर्डले भने पछिल्लो समय अर्थोडक्स चियाको प्रोत्साहनको काम शुरु भएको जनाएको छ । बोर्डले तत्कालै प्रदेश–प्रदेशमा ‘आन्तरिक बजार प्रमोसन सेन्टर’ खोल्न लागेको छ ।
अहिले यसका लागि कागजी काम भइरहेको छ । चिया प्रवद्र्धनका लागि बोर्डको पहिलो कार्यालय पोखरामा खोल्नेसमेत निर्णय गरिएको छ । ‘कोरोनाले अवरोध गरेकाले काम हुनसकेको छैन, तत्काल काम गर्नेछौँ’, चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णु भट्टराईले भने, ‘अहिले नेपाली अर्थोडक्सको खपत १५ प्रतिशत मात्र नेपालमा छ ।
यसैले हामीले प्रमोसनका कार्यक्रम ल्याएका हौँ ।’ सेन्टरमार्फत सातै प्रदेशबाट अर्थोडक्सको प्रवद्र्धन गर्दा चिया खरिदकर्ता बढ्ने बोर्डको अनुमान छ । साथै बोर्डले चीन सरकारसँग प्रत्यक्ष व्यापार गर्न सम्झौता गर्न लागेको छ । अहिले व्यक्तिगतरूपमा चिया जाँदै गरेकामा अब भने नेपाल–चीन उडानमार्फत नै चिया लानका लागि सम्झौता गर्न लागिएको हो ।
‘हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ पठाइसक्यौँ, निकट भविष्यमै यो काम हुन्छ’, निर्देशक डा. भट्टराईले भने, ‘लागत पनि घट्छ र किसानले उचित भाउ पाउँछन् ।’ गएको वर्ष मात्रै रु तीन अर्ब २० करोड ३९ लाख चार हजारको एक करोड ५० लाख चार हजार ३८० किलो चिया नेपालबाट निर्यात भएको देखिन्छ । यस्तै गत वर्ष रु ११ करोड ७७ लाख ३२ हजारको तीन लाख ४३ हजार ३५३ किलो चिया आयात भएको बोर्डको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
काठमाडौं, १६ फागुन । म्यानमारमा आज (आइतबार) सैन्य ‘कू’ को विरोधमा प्रदर्शन गर्नेहरुमाथि सेनाले गोली